iphupho ezithandwayo zezingoma amaRashiya amaningi - ukuthuthela efulethini entsha. Kodwa, ngeshwa, kuyenzeka ukuthi lesi yisikhathi esijabulisayo, hhayi lonakaliswe isimo eyanelisayo iningi izindlu ezintsha, elibangela lesi Sebawoti imizwelo engakhi. Kodwa wonke umuntu ufuna ukwenza ukuphila ekhaya azo ezimnandi futhi zikhululekile. Ngakho-ke, abaningi ngokushesha ngemva kokuthuthela ziqale ziphile efulethini ne okufezwayo wakhe. Indlela ukucacisa lapho ukuqala ukulungiswa isakhiwo? Ukuze lesi simo kumele wasondela ngokucophelela nangokucophelela.
Kuyini isamba ifa
Uma abanikazi ingcebo esitheni isakhiwo sokuhlala esisha bengazazi ukuqala ukulungiswa, into yokuqala badinga ukuthola ukuthi hlobo imali bangakwazi oyosichitha kukho. Kusobala ukuthi lezi zindleko izobandakanya ukuthengwa upende hhayi kuphela, ngomcako noma iphepha lokunamathisela odongeni, abanikazi kuyodingeka ukuthenga amapayipi ezibizayo, zama-tile, izinto zasekhishini. Esimeni lapho izimali sibaphatha kungagcini, asikho isizathu ukuthenga ngokweqile ezibizayo yokuqedela izinto. Izitolo eziningi DIY ungathola ibhajethi esikhundleni flooring ezibizayo noma mural okukhethekile. Noma ubani ezindla lapho ukuqala ukulungiswa kungaba bamangale ukuthi izindleko ezidingekayo ukufeza imisebenzi yakuqala; okuhlanganisa ukulungiswa, ukucubungula lokunameka ophahleni, izindonga floor laying, ukufakwa kwamafasitela neminyango, akuzona izinto eziphawuleka kakhulu.
Lapho isidingo ochwepheshe
Lapho uhlela ukuqala ukulungiswa in the izindlu ezintsha, kufanele kube nomsebenzi uqaphelisise kakhulu izintambo zikagesi. Abaningi sibhekene nezimo lapho indawo okungakalungi enethiwekhi izindlu kanye wokushintsha kungabangela okwalandela ezibizayo ukulungisa umzamo, ukushintsha design wakhulelwa, izimo umlilo ngezinye izikhathi yingozi. Labo ebhekene namacala anjalo, wazi kahle ukuthi ekufezeni imisebenzi ethile kumele iphathwe kuphela ngochwepheshe. Phela, nabo basuke zingamathuluzi okuthembekile, kanye ulwazi professional kanye nakho.
Abaningi bakholelwa ukuthi ukulungiswa okunjalo kuzobiza kakhulu. Kodwa uma abanikazi impahla kusengaphambili ukuxoxa neqembu ukwakhiwa, ukuqala ukulungiswa isakhiwo, kanye ukhethe kokuqeda izinto, izindleko zezimali kuyoba SOMBHALO evumelekile. Lezi ochwepheshe bekulungele ukutshela amakhasimende lapho ukuthenga Tile, wallpaper amahle, linoleum noma laminate, ikhwalithi okuzoba ngempela high, futhi izindleko impela ezingabizi. Phela, abantu abavamile ngokuvamile abazi ukuthi ukuqala elungisa indlu entsha nokuthi bahlangane esincane.
Labo abanikazi ezindlini e ukwakha isakhiwo esisha, lapho yanquma ukucela usizo kusukela ithimba abakhi abangochwepheshe, ngezinye izikhathi besaba ukuthi amasevisi abasebenzi abenza imisebenzi ngokwabo ebiza kakhulu. Eqinisweni, ungesabi. Okwamanje, imizi ngemizi abakhulu nabancane, ungathola lenqwaba iziphakamiso umsebenzi wokulungisa. Amaqembu anjalo izikhangiso zabo emaphephandabeni khulula ne-Internet, futhi kulapho edolobhaneni Ochwepheshe, cishe ukuthi kuyoba nalabo siyofeza umsebenzi odingekayo kwamanani wangempela hhayi Ayihaba.
Omunye ongakwazi ukulinganisela uqobo ukuba inani lemali lokwenza ngcono amakhaya abo, angafaka isicelo ejensi design. Kuyaziwa ukuthi kusukela isitayela amakamelo angaphakathi incike umoya yonke indlu. abaklami Modern zingathola iyiphi indlu intuthuko empumalanga neziyinkimbinkimbi noma isitayela cool zobuchwepheshe - ke kungaphansi kwayo yonke.
Labo abanquma ukuba afeze ukulungiswa ngohlobo lwakhe efulethini entsha uqobo zingatholakala ku-intanethi izinkundla thematic futhi amasayithi ukukubonisa ukudalwa ukubukeka yokuqala ekhaya yesimanje, labo abaye babhekana novivinyo ezinjalo.
Izakhiwo ezisebenzisekayo oqabulayo isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi siqaphe impilo yakho!